FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA FOHY ALIKA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika fohy alika
'Ity no Pointer Shorthaired Alemana antsika, Fritz. 2 taona izy ary alika tonga lafatra ho antsika. Fritz dia tsy mivadika, mankatò, manaja ary mavitrika! Ny toerana avo indrindra tamin'ny andron'i Fritz dia ny maharitra maka izahay isaky ny tolakandro. Manana filan-dratsy fatratra izy ary tsy mandà ny sakafo velively. Fritz dia nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fiofanana mahery vaika ary tia nihazakazaka ny làlana misakana. Ny toetran'i Fritz tsara indrindra dia ny fanajany ny fahefana. Azontsika atao ny milaza aminy izay tokony hatao amin'ny feo malefaka sy milamina ary hataony am-pifaliana izany. Fantany ny fetrany ary manao izay tsara indrindra vitany izy mba hampifaliana antsika. '
Alika manondro volo fohy alemana
The Pointer Shorthaired Alemanina dia gundog amin'ny tanjona rehetra. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha. Boribory somary boribory eo amboniny ny karandohany, malalaka sy arched amin'ny sisiny. Ny halavan'ny monja dia tokony hitovy amin'ny halavan'ny karandohany. Ny molotra dia lava miaraka amina fijanonana kely izay azo zahana amin'ny sisiny. Ny orona lehibe dia volontsôkôlà ary feno vavorona. Ny maso miendrika amandy, antonony dia mavo volontany. Ny sofina avo lenta dia malalaka, mihantona akaikin'ny loha. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Lalina ny tratra. Ny rambony dia voahidy hatramin'ny 40% amin'ny halavany. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny tongotra mifatotra dia ao anaty tranonkala. Dewclaws amin'ny tongony eo aloha dia azo esorina. Tery ny hoditra. Ny palitao fohy dia matevina sy marokoroko raha mikasika azy. Somary lava kokoa ny eo ambanin'ny rambony sy ny sisin'ny valahany, ary malemy kokoa, fohy sy mahia ny loha sy sofina. Ny lokon'ny palitao dia misy atiny mafy, atiny sy fotsy, voany na paty ny atiny, fotsy voadidy na ateraky ny atiny.
Iray amin'ireo karazany mahery vaika indrindra, ny Pointer Shorthaired Alemana dia a alika mihaza amin'ny natiora . Miaro, marani-tsaina, mazoto ary te hampifaly, dia tena tiany ny fianakavian'olombelona. Happy-go-lucky, tsy tia afa-tsy ny fidirana amina karazana hetsika manorina miaraka amin'ireo tompony toy ny a mandeha lavitra, mihazakazaka , fitsangatsanganana, fihazana, na lalao Frisbee. Ity karazana ity dia tsy mifanaraka amin'ny fiainana ao anaty kennel. Mahatoky, be fanahy ary sariaka, tiany sy mifangaro tsara amin'ny ankizy izany. Dominikanina ary haavon'ny angovo miovaova kely amin'ny alika kely ka hatramin'ny alika kely na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza, na izany aza, ireo izay maniry hiasa amin'ny fifaninanana an-tsaha avo lenta matetika dia mitaky hetsika bebe kokoa noho ny Shorthair antonony, saingy mbola alika angovo be dia be izay mila be dia be fanatanjahan-tena isan'andro . Mety indrindra amin'ny fianakaviana mavitrika. Rehefa tsy manao fanatanjahan-tena izy ireo dia mety ho lasa strung ambony sy sorena. Tsy hihaino ny GSP raha mahatsapa fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy, na izany aza tsy hamaly tsara ny fifehezana henjana. Mila tompona mampiseho ny a GSP rivotra voajanahary amin'ny fahefana manome mafy, nefa tony, matoky ary mifanaraka amin'ny Fitsipika tsy maintsy atao ny manaraka azy. Ny GSP filaharana ary mila firafitra amin'ny fiainany . Raha tsy misy fanatanjahan-tena na fitarihana io karazany io dia mety hiteraka fanahiana manasaraka ary mety hanjary Handringanana ary mitebiteby. Ny GSP voaova saina sy miorina tsara izay manana hetsika ara-tsaina sy ara-batana ampy miaraka amin'ny fandanjalanjana fitarihana tsy miovaova dia hifanaraka alika hafa SY saka . Ity karazana ity dia tia mivovo ary azo atokisana amin'ny olon-tsy fantatra. Mifandraisa tsara . Ho eo amin'ny voninahitr'izy ireo izy ireo raha toa ka zatra ampiasaina amin'ny zavatra nitaiza azy ireo ary nalaina an-dia.
Haavony: Lehilahy 23 - 25 santimetatra (59 - 64 cm) Vehivavy 21 - 23 santimetatra (53 - 58 cm)
Milanja: Lehilahy 55 - 70 pounds (25 - 32 kg) Vehivavy 45 - 60 pounds (20 - 27 kg)
Matetika dia karazany salama fa ny sasany mora voan'ny androbe, dysplasia hip, hermaphrodism ary lymphedema. Ny olana kely dia ny CHD, entropion, gastric torsion, VWD, pannus, OCD. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Ity karazana ity dia tsy asaina amin'ny fiainana an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka sy fianakaviana mpanao fanatanjahan-tena. Mety afaka mitsambikina izay fefy izay ambany noho ny 6 metatra ny halavany. Eo ambany fampiharana, GSPs mankaleo dia mpanakanto afaka mandositra.
Ny fanatanjahan-tena no zava-dehibe indrindra amin'ireo biby tsy misy reraka sy mahery. Izy ireo dia mihoatra ny lalao iray na dia ny fianakaviana mavitrika indrindra aza ary tsy tokony horaisina ho toy ny biby fiompy ao an-trano izy ireo, raha tsy hoe afaka manome toky izy ireo amin'ny fampiharana mahery vaika. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Raha tsy dia ampiasaina loatra ity karazana ity dia mety ho lasa tsy milamina sy manimba.
Alikakely 7 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
Ny palitao malama an'ny Pointer dia tena mora taovolo. Miborosy matetika fotsiny amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy ilaina. Ny fikosehana amin'ny lamba famaohana na chamois dia hamela ny akanjo milelalela. Zahao ihany koa ny tongotra, indrindra taorian'ny fampihetseham-batana na fiasan'ny alika. Arofano tsara ny alika aorian'ny fihazana mba hisorohana ny mangatsiaka. Diniho matetika ny sofina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Na dia tsy voaporofo aza ny sasany dia mihevitra fa ny Pointer Shorthaired Alemanina dia taranaky ny karazana fihazaza alemanina, alika manitra, alika mandeha ary lalan-kaleha, toy ny Tondro Espaniola taloha , Alika Vorona Alemanina, Hounds of St. Hubert (karazana Bloodhound) , ary ny Foxhound . Taty aoriana ny English Pointer dia niampita mba hanampy hafainganana sy fiaretana. Alika mpihaza dia alika alika ilaina rehetra izay tsy vitan'ny orona tsara, fa afaka manondro, manara-dia, retriever tena tsara sy gundog, na an-tsaha na rano ho an'ny volom-borona sy volom-borona. Tian'izy ireo ihany koa ny alika izay mpihaza faran'ny herinandro faran'izay tsara, saingy nanao namana sy mpiambina fianakaviana tsara. Ny Pointer Shorthaired Alemanina dia neken'ny AKC tamin'ny 1930. Ny Shorthaired Pointer Alemana dia nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny Pointer alemana Wirehaired . Ny talenta an'ny Shorthaired Pointer Alemanina dia ny alika fampisehoana, fankatoavana, gundog, fitadiavana, fitsapana ny fitsapana, fitsapana any an-tsaha ary fitsapana fihazana.
Yukon the GSP amin'ny alika kely amin'ny 8 herinandro
Sammy the German Shorthaired Pointer amin'ny 12 taona manondro— 'Na eo aza ny taonany dia mbola feno tanjaka i Sammy.'
Vik the German Shorthaired Pointer amin'ny 2 taona— 'Vik dia mpiara-miasa mahery vaika ary atleta izy. TIA mihaza izy! Tsy misy mahasakana azy tsy hahatratra ny tanjony. Tena mazoto sy masiaka be amin'ny asany rehetra izy. Miroboka anaty rano amin'ny hafanam-pony rehetra ... kirihitra koa! Fa amin'ny faran'ny andro dia ny fandriana ao anatiny fotsiny no tadiaviny hifaly miaraka amin'ny ankohonany. '
Vik the Pointer Shorthaired Alemana amin'ny 2 taona mitsambikina avy eo amin'ny dock ho any anaty rano
'Our Shorthair Pointer Sadie Pointer dia ampahany lehibe tamin'ny fianakavianay. Izy dia aseho eto amin'ny 2 taona. Rehefa mandeha mitondra fiara isika dia miaraka aminy (alika tsara indrindra amin'ny dia). Tiany ny pheasant mihaza ... minitra nomaninay ny basy mipetraka eo am-baravarana miandry izy. Tiany ny mandeha aminy, maka baolina izy (manandrana mahazo baolina tenisy 3 ao am-bavany izy). Mandondona manodidina ny baolina tenisy amin'ny tany toy ny saka koa izy. Entintsika mivoaka any ambanivohitra izy mandeha lavitra . Izany no avonavony sy hafaliany. Tiany ny manondro ireo vorona, bibikely sy izay kely noho izy. Tiany ny misitrika miaraka aminay amin'ny lamba firakotra ... okay manimba azy. Fa fantany tsara fa tiana izy. Mitaiza zaza ato an-tranoko aho. Tian'ny ankizy rehetra izy ary tsy andriny ny hahatongavan'izy ireo isan'andro! '
'Ity no zanak'alika Alemà Shorthaired Pointer, Hudson, 6,5 herinandro, mandritra ny fotoana hanaovana fanazaran-tena ary 'mahita' elatra Pheasant sasany napetrako tao anaty bozaka. Nanana fipoahana izy ary tia nihazakazaka namaky ny ahitra lava. '
Sadie ilay alika Shorthair Pointer alika tokony ho 4 volana eo ho eo
Redi Turkio Oaze, 2 taona
sary ny yorkie sy Chihuahua Mix
'Ity ny sarin'i Sasha Shorthair Pointer Sasami ahy. 10 volana izy amin'ity sary ity. Alika tia sy malala i Sasami izay tia mihazakazaka sy milalao. Ankafiziny ny manenjika vorona, izay nataony tamin'ity sary ity, saingy tsy dia mivily amin'izy ireo. Alika tena sariaka sy tia olona izy. Tiany ny milalao miaraka amin'ny zanako lahy 2, Brandon sy Kane. Tsy faly izy raha tsy miaraka amin'ny olony. Tsy mimenomenona mihitsy izy ary tiany ho ivon'ny fiheverana. Amin'ny maha mpankafy an'i Cesar Millan ahy dia takatro ny maha-zava-dehibe ny fanatanjahan-tena isan'andro ho an'ny alika matanjaka be ary azoko antoka fa manao fanatanjahan-tena isan'andro i Sasami. '
'Abby dia 3 volana eo amin'ny sary ary lasa fanampiana mahafinaritra ho an'ny fianakavianay. Alika be fitiavana izy ary mankafy mandany ny fotoanany rehetra miaraka amin'ny fianakaviana. Tiany ny mandray bola ary efa voaofana mihaza . Abby dia manana angovo be ary mila farafaharatsiny mandeha tsara isan'andro . Tianay ny hitondra kitapom-batsy ho azy rehefa mandeha izy mba hahafahany mahazo fanatanjahan-tena bebe kokoa ary hamoaka ny heriny mandritra ny diany. Izy dia manana nianatra ny fomba hipetrahana hitsaboana ary dia crate voaofana . Ny fanamarihany no zavatra tsara indrindra. Malemy loatra ny sofiny ary mijery anao ireo mason-koditra malaso mangalatra ny fonao ireo. Ny zanako lahy Cole, 13 taona, dia nifidy an'i Abby ho sakaizany sy alika mpihaza. Manana fatorana izay azo faritana ho ' sakaizan'ny lehilahy . ''
Cali, Pointer Shorthaired Alemanina toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro saika hatory kely
Hijery ohatra hafa momba ny Pointer Shorthaired Alemanina
Sary mpanondro fohy alemana 1
mastiff tibetan volo volamena
pomeranian cross shih tzu amidy
tondro mainty mainty matevina mainty
kely alika pincher weiner alika mifangaro